Finland oo ka Fiirsanaysa Dadka Magan-galya Doonka ah – Radio Daljir
Oktoobar 28, 2015 5:26 b 0
Arbaco, Oktoobar 28, 2015 (Daljir) —Waaxda Socdaalka Dowlada Finland ayaa soo saartay warbixin ay kaga hadleyso xaaladaha ammaanka ee dalka Soomaaliya, waxaana warbixinta lagu cadeeyay in amaanka dalka Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii hore.
Waaxda Socdaalka Finland ayaa sheegay iney wax badan ka badaleyso qaabilaada qaxootiga Soomaaliyeed ee tagaya dalka Finland, kuwaasi oo inta badan ku gali jiray dalkaasi in amni daro ay ka jirto koofurta iyo bartamaha Soomaaliya, sida warbixinta lagu sheegay.
Masuuliyiinta waaxda Socdaalka Finland ayaa sheegay in xaaladaha amaanka Soomaaliya wax badan iska badaleen gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ah caasimada Soomaaliya, waxaana laga yaabaa in arintaasi ay saameyso qaabilaada qaxootiga Soomaaliyeed ee tagaya dalkaasi.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in meelo kamid ah Soomaaliya ay wali xaalad amni daro ka jirto ayna ka warqabaan, balse horumar amni ayaa laga dareemayaa magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo ku yaala koofurta dalka.
Qiimeyntii hore loo sameeyay marka lala barbar dhigo qiimeynta cusub ee waaxda socdaalka Finland ayaa la ogaaday inuu jiro isbadal weyn oo dhanka amaanka ah, waxaana taasi ay la micno tahay dadka ka tagaya Muqdisho iyo gobolada kale iney amni daro ku marmarsiyoon karin, sida warbixinta lagu sheegay.
Ugu dambeyn ciidamada amaanka ee dowlada iyo AMISOM ayaa lagu amaanay isbedelka dhanka amaanka ee ka jira magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran.